စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 4:57 PM7စာဖတ်သူတို့အမြင်
love is happines.
love is dream.
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:05 AM 8 စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 7:45 AM6စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 11:21 AM7စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 9:23 PM6စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 10:04 AM3စာဖတ်သူတို့အမြင်
အခန်းငယ်ထဲက ငါ ရုန်းထွက်ဆဲ။
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 12:40 AM5စာဖတ်သူတို့အမြင်
အဲဒီအချိန်တုန်းက အဖေပြောခဲ့တယ်တဲ့ သားလေးကလဲ ကြာလိုက်တာ...
လူလောကထဲရောက်လာတော့မယ့် ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့
သူ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အားသစ်တစ်ခုကို စောင့်သလိုမျိုး....
ပြန်လာတော့ အဖေကပြောတယ် သားကိုလွမ်းလိုက်တာ.....
ရက်တိုခရီးသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့
သူဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အင်အားတစ်ခုကို တောင့်တသလိုမျိုး......
ဆုရတော့ အဖေပြောတယ် သားကတော်လိုက်တာ.......
ဆုရခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်နဲ့
သူ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အင်အားတစ်ခု ပိုပြီးကြီးမားလာသလိုမျိုး......
ရန်ဖြစ်လို့ အဖေပြောတယ် မင်း မိုက်လိုက်တာ....
လူမိုက်ဆန်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ၀မ်းနည်းတဲ့စိတ်နဲ့
သူ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အင်အားတစ်ခု ယိုင်နဲ့သွားသလိုမျိုး.......
အဲဒီတော့ အဖေကပြောတယ် မင်းဘာလုပ်မလဲ.......
ခြေလှမ်းသစ်စတော့မယ့် ကျွန်တော့်အတွက် ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်နဲ့
သူ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အင်အားတစ်ခု ပိုပြီးမြင့်တက်လာသလိုမျိုး......
အိမ်ပြန်တဲ့ခါ အဖေပြောတယ် သားကိုစောင့်နေတာ....
အိမ်အပြန်နောက်ကျခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို တောင့်တတဲ့စိတ်နဲ့
သူ့ဘ၀ရဲ့ ထားရစ်ရတော့မယ့် မျှော်လင့်ခြင်း အင်အားတစ်ခုကို နောက်ဆုံးကြည့်သလိုမျိုး....
ဘယ်လိုခံစားမှုတွေ ကျွန်တောကြောင့် သူခံစားရဦးမလဲ
အဖေ့ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းအင်အားက ကျွန်တော်တဲ့
ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့မှီခိုရာ မဏ္ဍိုင်ပာာလဲ အဖေပါပဲ
ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ မှီခိုရာ အဖေပျောက်ဆုံးသွားပေမယ့်
အဖေ့ရဲ့ အားသစ်တစ်ခုတော့ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်သေးတယ်......အဖေရယ်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 7:36 PM2စာဖတ်သူတို့အမြင်